Mario Balotelli trains at Melwood after completing £16m move to Liverpool FC - Liverpool Echo
The Italian international sealed his move from AC Milan earlier today
Updated 07:55, 28 AUG 2014
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)1 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)2 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)3 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)4 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)5 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)6 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)7 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)8 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)9 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)10 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)11 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)12 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)13 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)14 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)15 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)16 of 17
Liverpool New Signing Mario Balotelli trains at Melwood today on August 25, 2014 in Liverpool, England. (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images)17 of 17